ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): June 2009
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေ ရုပ်ကို အလှပြင်ခြင်း၊ စိတ်ကို အလှပြင်ခြင်း လို့အလှပြင်ခြင်း ( ၂ ) မျိုးရှိတယ်။ ရုပ်ကို အလှပြင်ခြင်းသည် အအိုတွင် လမ်းဆုံးပြီး၊ စိတ်ကို အလှပြင်ခြင်းသည်သာ နိဗ္ဗာန်မှာ လမ်းဆုံးတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီအလှပြင်ခြင်း ( ၂ ) မျိုးမှာ ရုပ်ကို အလှပြင်ခြင်းထက် စိတ်ကို အလှပြင်ခြင်းက ပိုမြတ်တယ်။
သမထ နဲ့ဝိပဿနာ
သမထဆိုတာကတော့ အရှုခံအာရုံအပေါ်မှာ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တလို မမြင်ဘူး။ အာရုံ နဲ့ မှတ် စိတ်နဲ့ တည်ပြီးတော့ သမာဓိအားကောင်းလာအောင် စူးစိုက်နေရုံလောက်ပဲရှိတယ်။ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကတော့ လောကီဈာန် အဘိညာဉ်တွေ ရပြီးတော့ ဗြဟ္မာ့ပြည် ရောက်ရုံပါပဲ။ ၀ိပဿနာကတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘူး။ အရှုခံအာရုံအပေါ်မှာ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ လက္ခဏာရေးသုံးပါး ထင်မြင်လာအောင်ရှုမှတ်ရတယ်။ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကတော့ အရဟတ္တဖိုလ်ပေါက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီး အိုနာသေဇာတ်၊ အမြစ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်။
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေ အနေနဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာ၊ အချိန်မီ လုပ်ရမှာ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာ၊ အကျိုးရများတာဟာ ဘာလဲလို့ မေးရင် သတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ပဲလို့ဖြေဆိုရမယ်။ ဒါဟာ အမှန်ဆုံးအဖြေပဲ။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:53 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:36 AM0comments Links to this post
ရုပ်နဲ့ နာမ်ဟာ သဘာဝတရား
တရားဆိုတာသဘော။ သဘောဆိုတာလဲ တရားပါပဲ။ ( ၂ ) မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ တရားသဘော။ သဘောတရား မဟုတ်လား။ ဘုန်းကြီးတို့ သူတော်စင်တွေ သဘောတရားဆိုတဲ့ သဘာဝတရားဟာ ရုပ်နဲ့နာမ်ပါပဲ။ အဲဒီ ရုပ်နဲ့ နာမ်ဟာလည်း သစ္စာဖွဲ့ လိုက်တော့ လေးပါးရတယ်။ သစ္စာလေးပါးသိအောင် ၀ိပဿနာတရားကို ကြိုးစား အားထုတ်ရတယ်။
ပွား - သိ - ပယ် - ဆိုက်
သစ္စာလေးပါးဆိုတာ အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ သိ - ပယ် - ဆိုက် -ပွား ပေါ့။ ဒုက္ခသစ္စာကို ပိုင်းခြားသိခြင်း။ သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ခြင်း၊ နိရောဓသစ္စာကို ဆိုက်ရောက်ခြင်း။ မဂ္ဂသစ္စာကို ပွားများအားထုတ်ရခြင်း လို့ 
ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါက ဒေသနက္ကမ ( ဒေသနာဟောစဉ် ) အားဖြင့် ပြဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ တကယ်တန်း အလုပ်ခွင်ကျတော့ ပွား - သိ - ပယ် - ဆိုက် လို့မှတ်ကြရမယ်။
ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ရဲ့အစဟာ သရဏဂုံသုံးပါးပဲ၊ အဆုံးတော့ အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်း၊ ဆိုက်ရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်၊ ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းနေသူဟာ လူ့ ဘ၀တွင် အသာဆုံး၊ အမြတ်ဆုံး
(ဒီပုံပြင်ကို မြန်မာပြည်က ဆရာတော်ဘုရားအချို့ တရားတော်တွေနှင့် စာအုပ်တွေထဲမှာ ထည့်ဟောကြ၊ ရေးကြတာကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။ “သြော်..ဟုတ်လား...” ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးလေးနှင့်ပါ။ စာဖတ်သူများလည်း နာဖူးကြ၊ ဖတ်ဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:53 AM0comments Links to this post
ပြင်ပသို့အာရုံမပြုဘဲ အတွင်းဘက်သို့ ချည်း လှည့်ထားသည့် အလေ့အကျင့် ရင့်သန်လာသောအခါ ဖြစ်ပေါ် လာလေသမျှသော မြင်မှု၊ ကြားမှုမှစ၍ စိတ်ကူးစိတ်သန်းဟူသမျှသည် မိမိအတွင်း၌သာ အကြောင်းအားလျော်စွာ ဖြစ်လာကြ၍ ဖြစ်ပြီးသောအခါ ပျောက်ပျက်သွားကြသည်။ နေအိမ်ကို သတိရသော အခါ မိမိ၏ မနောတွင် ( မှန်ပေါ်၌ အရိပ်ထင်ခြင်းကဲ့သို့ ) ထင်လာသော အရိပ်မျှသာဖြစ်သည်။ အရိပ်တစ်ခုပြီး တစ်ခုထင်လာခြင်း၊ တကယ့်ဟာတွေ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေဟူ၍ မှတ်ထင်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိက အဟုတ်ကြီး ထင်မှတ်နေသော အရာခပ်သိမ်းသည် မနောတွင် ခဏကလေးမျှပင် အရိပ်ထင်၍ဖြစ်ပြီး ပျောက်ပျက်သွားကြသည်ချည်းဖြစ်သည်။ အဟုတ်ရှိ၊ တကယ်ရှိမဟုတ်၊ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ အခိုက်အတန့် အားဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟူသော ဥာဏ်အမြင်ပေါ်ပေါက်လာပါတော့သည်။
ထိုသို့ သော ဉာဏ်အမြင်သို့ရောက်သောအခါ မနောအကြည်ဓာတ်ပေါ်တွင် ခဏချင်း ခဏချင်း အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ သူ့ ဘာသာ အရိပ်ထင်လာသော ‘‘ အာရုံ ’’ များအတွက် မိမိက ဘာများကြောင့်ကြစရာ၊ ဂရုစိုက်စရာ ရှိသနည်း။ မိမိနှင့် ဘာဆိုင်သနည်း။ တွယ်တာစရာလည်း မဟုတ်၊ ပူပန်စရာလည်း မဟုတ်၊ စိုးရိမ်စရာလည်းမဟုတ်။ ဖြစ်လာသမျှသော အခြင်းအရာများသည် ခဏတဖြုတ်ကလေးဖြစ်ပြီး ပျောက်ပျက်သွား သည်ချည်း ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်လာသည်တွင် အကြီးအကျယ် စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိပါသည်။
ထိုနောက်တဖန် မနောအကြည်ဓာတ်ပေါ်၌ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ အခိုက်အတန့် အားလျော်စွာ ခဏတဖြုတ် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြင်းအရာများ (အရိပ်များ ) သာ ဖြစ်သည်ဟု နေ့ ရက် အတန်ကြာရှည်စွာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခဲ့ရာမှ တစ်နေ့ သ၌ ‘‘ ကောင်းပါပြီ။ မနော၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြင်းအရာ အားလုံးသည် ဖြစ်ရုံကလေးဖြစ်ပြီး ပျောက်ပျက်သွားသည်ချည်း ဖြစ်သောကြောင့် အဟုတ်ရှိ တကယ်ရှိ မဟုတ်နိုင်ခြင်းကား မှန်ပါပြီ။ သို့ သော် အဟုတ်ရှိ တကယ်ရှိ သဘောတရားမျိုးကော မရှိနိုင်ပါသလော၊ ရှိနိုင်လျှင် ဘယ်မှာရှိပါသနည်း ’’ ဟူသော မေးခွန်းသည် စိတ်ထဲတွင် ပေါ်လာပါတော့သည်။
နောက်တစ်ခဏ၌ အာရုံတစ်ခု ဘွားခနဲ ပေါ်လာပါသည်။ ‘‘ဟုတ်လိုက်လေခြင်း၊ ဒါကမှ တကယ်ရှိတဲ့ သဘောတရားပဲ။ ကြည့်စမ်းပါဦး။ အနားတွင် ကပ်နေပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ မမြင်မိဘဲ လျှံနေခဲ့မိတာ အံ့သြပါရဲ့ ’’ စသည်များဖြင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိပါသည်။ ဥပမာဆောင်ရသော် ဒင်္ဂါးတစ်ပြားကို ‘‘ ပန်းဘက် ’’ ချည်းကြည့်ခဲ့မိရာမှ လှန်ကြည့်လိုက်သောအခါ ‘‘ ခေါင်းဘက် ’’ ကိုမြင်ရခြင်းကဲ့သို့ နီးလျက်နှင့် ဝေးနေသည်ဟု
တကယ်အဟုတ်ရှိသောအနေဖြင့် မြင်လိုက်ရသော သဘောတရားမှာ ‘‘အာရုံ ’’ မျှသာဖြစ်၍ ပုံသဏ္ဌာန် အသွေးအရောင်အားဖြင့် ဖော်ထုတ်ပြောပြနိုင်သော အခြင်းအရာမျိုးကား မဟုတ်ပါ။ ထိုအခြင်းအရာကို စာတတ်သူများ ခေါ်ချင်ရာ ခေါ်ကြစေ။ ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ထဲ၌ကား ‘‘ ဖြစ် ’’ နေသောအခြင်းအရာမျိုး မဟုတ်။ အခါခပ်သိမ်း အမြဲတမ်းရှိနေသော သဘောတရားဟူ၍သာ သိမြင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်မှာ ဤအခြင်းအရာကို ချောင်ချောင်နှင့် တွေ့ ရခြင်းမဟုတ်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော်အနက် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်မျှလည်းကောင်း၊ ခပ်ပြင်းပြင်း အားထုတ်သော နှစ်ပေါင်း လေး ငါးနှစ်မျှလည်းကောင်း၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ရက်သတ္တတစ်ပတ်မျှ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီး အားထုတ်သည့် ရက်သတ္တပတ်ပေါင်း ၂၀ ခန့် မျှလည်းကောင်း ကြာရှိခဲ့ပြီးမှ တွေ့ ရသော “ စိတ်သဘာဝ ’’ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြရခြင်းမှာ ကြွားဝါလိုခြင်း၊ အသားယူလိုခြင်းကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ပါရမီခံ ရင့်သန်၍ အထုံဝါသနာ ပါရှိသူများ ဖတ်မိကြလျှင် စိတ်အားတက်ကြွ၍ သဒ္ဓါတရား တိုးတက်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက် စေတနာဖြင့် တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်အဖို့ ရာ၌မူ အာသဝေါကင်းသောအဖြစ်သို့မရောက်မချင်း ( ဤတစ်ဘ၀အတွင်း ) ဆက်လက်အားထုတ်ဖို့အားခဲလျက်ပင်ရှိရာ ပရိယေသန ၀မ်းစာအတွက် လုံလောက်စွာရှိသော တစ်နေ့ တွင် မျှော်မှန်းသည့် ပန်းတုံးတိုင်သို့မရောက်မနေဆိုကာ အချိန်ရှိသမျှ တစ်စဉ်တစ်တန်းတည်း ဆက်တိုက်အားထုတ်ဖို့ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဖြစ်ပါသတည်း။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:19 AM0comments Links to this post
Labels: Shweoodaung, ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ
ဒီရက်ပိုင်းထဲ ကျွန်တော် ဖတ်လက်စတန်းလန်းနှင့် နှစ်ချီကြာနေတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို လက်စသပ်ပြီး ပြီးအောင်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ ဆရာတော် ဦးဇောတိက ရေးထားတဲ့ "A Map Of The Journey" ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါ။ စာအုပ်က မြန်မာပြည်မှာကတည်းက ဝယ်ပြီး လက်ထဲမှာ ရောက်နေတာ နှစ်နှစ်လောက် ရှိနေပါပြီ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ပြီးအောင် မဖတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ နဲနဲဖတ်လိုက် ရပ်လိုက်။ တစ်လ နှစ်လ လောက်ကြာမှ တစ်ခါပြန်ကိုင်လိုက်၊ မေ့သွားလို့ အစကနေ ပြန်ဖတ်လိုက်၊ နောက် မအားတော့လို့ မဖတ်ဖြစ်လိုက်နှင့် သံသရာလည်နေတာပါ။ ခရီးသွားတိုင်းတော့ အမြဲသယ်သွားပါတယ်။ အားရင်ဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့။ ဒီလိုနှင့်ဘဲ စာအုပ်က ပြည်ပရောက်တဲ့အထိ ပါလာတာပါ။
ဆရာတော်ရဲ့အရင်စာအုပ် "Snow In The Summer" တုန်းကတော့ ဆက်တိုက်ပြီးအောင် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းထဲမှာ ပါဠိနှင့် တရားစာပေကို အင်္ဂလိပ်လိုအသုံးလေးတွေ လေ့လာချင်တာနှင့် ဒီတစ်ခါတော့ ပြီးအောင်ဖတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး အလုပ်သွားအလုပ်ပြန် ရထားပေါ်မှာ ဖတ်လိုက်တာ သုံးပတ်လောက် အချိန်ပေးလိုက်တော့ ပြီးသွားပါတယ်။ အခု အဲဒီစာအုပ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက် စာအုပ်မိတ်ဆက် (သို့ ) စာအုပ်အညွှန်းလေး လက်ဆင့်ကမ်းပေးချင်လို့ ပါ။
စာအုပ်က နိုင်ငံခြားက တရားစခန်းတစ်ခုမှာ ယောဂီတွေအတွက် ဟောထားတဲ့တရားကို စာအုပ်အနေနှင့် ပြန်ရေးထားတာပါ။ အဓိကကတော့ ဉာဏ်စဉ်တရားကို ဟောထားတာပါဘဲ။ အားလုံး အခန်း(၁၁) ခန်း ပါဝင်ပြီး အခန်းတွေကို Talk (1) ကနေ Talk (11) အထိခွဲထားပါတယ်။
ပထမအခန်းတွေမှာ တရားစအားမထုတ်မီ မိမိကိုယ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ပုံကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြီးမှ တရားစအားထုတ်ပြီး သမာဓိထူထောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သမာဓိကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များအကြောင်းနှင်
့ ၄င်းတို့ ကို ဖြတ်သန်းကျော်လွှားပုံတွေကိုလည်း ရှင်းလင်းထားပါတယ်။ နောက်အခန်းတွေမှာတော့ ၀ိပဿနာ စတင်အားထုတ်ပုံ၊ ပညတ် ပရမတ်ခွဲပုံ၊ နောက် နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေပြီး ပစ္စဝေက္ခဏဉာဏ်အထိ ဉာဏ်စဉ် (၁၆)ပါးလုံးကို တစ်ဉာဏ်ချင်းစီ အသေးစိတ် ကွဲပြားမှုရှိအောင် ရှင်းလင်းပေးထားပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အခုစာအုပ်ရဲ့ ထူးခြားမှုလေးကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဉာဏ်စဉ်တရားတော်တွေအကြောင်းကို ဆရာတော်ဘုရားကြီးများနှင့် ဓမ္မစာပေပညာရှင်များ ရေးသားထား၊ ဟောပြပေးထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုစာအုပ်မှာက ဆရာတော်က ဉာဏ်စဉ်တွေရဲ့သဘော၊ သဘာဝလက္ခဏာတွေကို မိမိရဲ့ ကိုယ်တွေ့ တရားအတွေ့ အကြုံများနှင့် ယှဉ်ပြီးဖော်ပြပေးထားတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်ခိုက်မှာ လောကီလူမှုကိစ္စတွေမှာ ဘယ်လိုမျိုး ယောဂီတစ်ဦးအနေနှင့် ဖြစ်တတ်ကြောင်း သတိပြုရမယ့်အချက်တွေ ဆင်ခြင်ရမယ့် အချက်တွေကို ဓမ္မဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဉာဏ်စဉ်များအပြီးမှာတော့ သောတာပန်တစ်ယောက်ရဲ့စိတ်အခြေအနေ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ တရားအပေါ် နားလည်ယုံကြည်ပုံတွေကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ အရိယာအဆင့်အလိုက် ကိလေသာ ပယ်သတ်မှုအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ နောက်ဆက်လက်ပြီး ရပြီးသား သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို ၀င်စားပုံ နည်းလမ်း နှင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ အခက်အခဲများကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက် အထက်မဂ်ဖိုလ်တရားများကို ဆက်လက်အားထုတ်ဖို့ ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ပုံနှင့် အားထုတ်ပုံကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ တရားအားထုတ်နေစဉ် ဖြစ်တတ်တဲ့အခက်အခဲများအတွက် စိတ်ထားတတ်ရန်နှင့် နည်းလမ်းမှန်မှန် အားထုတ်နိုင်ရန် ဟောပေးထားပါတယ်။
စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကတော့ ဆရာတော့်ရေးဟန်အတိုင်း စာမဆန်ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖတ်လို့ ရတဲ့ ဓမ္မစာပေ အရေးအသား ဟောပြောပို့ ချချက်များဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ် ကို အခြေခံပြီး ရေးသားဟောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ တရားအားထုတ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် တရားအားထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ သူများအတွက် သဒ္ဓါတရား တက်ပြီး အသိဉာဏ်ပွင့်စေတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်နည်းနှင့်ဘဲ အားထုတ်သူ ဖြစ်ဖြစ် ဒီခရီးကို လူတိုင်းဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်လို့ဘယ်ယောဂီအတွက်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးတည့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်က သူ့ ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ တရားအတွေ့ အကြုံတွေနှင့် ပေါင်းပြီး ဟောထားတာမို့ တကယ်လို့ဆရာတော်နှင့် စရိုက်ဝါသနာတူပြီး အားထုတ်ပုံနည်းလမ်းတူသူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ တိုက်ဆိုင်တာတွေ အများကြီးနှင့် တော်တော် အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို အွန်လိုင်းမှာ ဒီနေရာကနေ http://www.buddhanet.net/pdf_file/mapjourney6.pdf Download ဆွဲချလို့ ရပါတယ်။ ကိုစိုးဝင်းထွဋ်ရဲ့( http://soewinhtut.multiply.com/journal/item/12/Map_of_The_Journey_ebook_English_Languagehttp://www.buddhanet.net/pdf_file/mapjourney6.pdf) ကနေလည်း ယူလို့ ရပါတယ်။ MP3 အနေနှင့် နာချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်ခ်တွေ ကနေ Download ဆွဲချပြီး နာလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျား။
1: A Map of the Journey - day 1
2: A Map of the Journey - day 2
3: A Map of the Journey - day 3
4: A Map of the Journey - day 4
5: A Map of the Journey - day 5
6: A Map of the Journey - day 6
7: A Map of the Journey - day 7
8: A Map of the Journey - day 8
9: A Map of the Journey - day 9
10: A Map of the Journey - day 10
11: A Map of the Journey - day 11
ကျွန်တော်ကတော့ ဓမ္မဒါနအဖြစ် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါပြီ။ ဓမ္မမောင်နှမတို့ က တကယ်လို့ ဖတ်ရှုနာယူကြည့်လို့မိမိအတွက် အကျိုးတစ်ခုခု ဖြစ်ထွန်းခဲ့ရင် ကိုယ်ခင်မင်တဲ့ သူများကို ဆက်လက်ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းပေး လိုက်ပါအုံးလို့ဆန္ဒပြု တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:43 AM2comments Links to this post
By: Story Sorcha Ni Bhearain, photo Yingyong Un-Anongrak
So what do you get when you combineaBuddhist meditation master andawarrior code? Answer: Nothing and everything.
Sayadaw U Jotika from Burma took an early dislike to an anonymous poem from around the 14th century that's best known as The Samurai's Creed, he toldapacked audience atarecent dhamma talk in Bangkok. (Sayadaw isaBurmese honorific forahighly respected senior monk.)
But the verses' pared-down simplicity and unlikely-sounding combinations eventually wore down that resistance and grew to captivate the 62-year-old teacher, whose ideas are readily available in Burma on CDs, in books and even adorning the walls of the Lucky Seven Tea Shop in Rangoon.
The latter wasarunning theme in the Sayadaw's early book, Snow in the Summer, available in English and Thai from local publisher DMG Books.
Sayadaw U Jotika's next book in English and Thai will beatranslation from the Burmese, My Mind is My Home, which exploresaseries of paradoxes around having nothing _ and everything.
When you think about these lines, it makes you feel connected to the whole universe, and that feeling is really amazing. It'savery wonderful feeling.
These days people feel more and more isolated. They don't feel connected, maybe not even with family members. But when you get into this feeling of being connected to the whole universe, you don't feel lonely any more.
So when you really pay attention to your mind, and see how the mind works, what it is thinking and feeling, if we see "I am greedy," just see it. Don't try to justify it, just see the plain truth, "I am greedy."
If you are angry, look at your mind and see "I am angry." Don't try to justify it. Just observe the truth.
See how beautiful and how true it is. If your mind is not your friend, then I don't think you can have any friends. If you are your own enemy, how can you make friends with anybody else?
When we really think of it, our real enemy is not out there, outside. It's inside, in not paying attention, not knowing.
And when you see for this yourself, you don't feel so afraid any more. Some people when they really develop vipassana inside, are not even afraid to die. They pass away very calmly, peacefully.
- 'Snow in the Summer' is published by DMG Books (www.dmgbooks.com) and is available in English and Thai at DMG Book Store, 22nd floor, Amarin Plaza, 496-502 Phloenchit Road. 'My Mind is My Home' will be published shortly in English and Thai by the same publisher.
- To listen to the full English language recording of Sayadaw U Jotika's talk, held at the Bodhgaya Hall at Amarin Plaza, download an MP3 file from littlebang.wordpress.com, which is alsoagreat resource for Bangkok-based English speakers about events and discussions on Buddhism.
(http://www.bangkokpost.com/leisure/leisurescoop/17350/my-mind-is-my-home ကို ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
သတ္တ၀ါတို့ ၏ ‘‘ စိတ် ’’ သဘာဝမှာ ပစ္စုပ္ပန်ဟူ၍လည်း သတိမပြုမိ၊ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် အပေါ်၌လည်း မနေလို။ အာရုံနှင့် အာရမ္မဏိတ တိုက်မိ၍ (၀ိညာဉ် ) အသိစိတ်ကလေး ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့် တပြိုက်နက် အတိတ်၊ အနာဂတ်နှင့် ဆက်စပ်သည့် ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုများသည် ချက်ချင်းပင် ၀င်လာတတ်သောကြောင့် အားထုတ် ခါစတွင် စိတ်ပျက်မိမတတ် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်ပေသည်။ သို့ သော် လက်တွေ့ စမ်းသပ် ကြိုးစား သည့် အခါ အားရှိဖွယ်သော ‘‘ ပေါင်းကူး ’’ ကလေးများလည်း တွေ့ ရတတ်ပါသည်။
အားထုတ်လျှင်အားထုတ်ချင်း ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်အပေါ်၌ ထား၍မဖြစ်သည်မှာ လူတိုင်း၏ အတွေ့ အကြုံ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပေမည်။ ‘‘ တကူးကူး ’’ ဟူသော အသံကို ကြားလိုက်ရလျှင် ကြားလိုက်ရခြင်း‘‘ ချိုး ’’ ဟု အသိစိတ်ဝင်လာခြင်းမှာ ဓမ္မတာပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အချို့ ကမူ မည်သည့်သစ်ပင်ပေါ်မှ ကူလေသနည်း။ ‘‘ချိုး ’’ ကူတဲ့ ရာသီက စောလှချေတကား၊ ချိုးသား မစားရသည်မှာ အတန်ကြာလေပြီ စသော စိတ်ကူးများပင် ဖြစ်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။ ပထမ၌ လေး ငါး ခြောက်ချက် ထိုကဲ့သို့ကူးကျော်ပြေးလွှားရာမှ သတိနှင့်ကြိုးစားသော သူသည် ၂-ခုန်၊ ၃-ခုန်နှင့်မျှ သတိရ၍ ‘‘ ဘရိတ်အုပ် ’’ လိုက် နိုင်ပေလိမ့်မည်။ အားရှိဖွယ်သော အချက်ဟူသည် မှာ မည်မျှလောက် ခုန်၍ ကူးကျော်သွားမိသည်ဖြစ်စေ၊ နောက်ဆုံးတွင် သတိရ၍ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် သို့ ပြန်ခေါ် လာနိုင်ခြင်းတည်းဟူသော သတိသည် တန်ဖိုးရှိ၍ ရှေ့ အဖို့ ရာ၌ တိုးတက်စေဖို့ပါရမီဖြစ်သည်ဟု နားလည် သင့်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သတ္တ၀ါသည် တစ်သံသရာလုံးတွင် ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်ထားဖို့ ဘယ်တော့မှ သတိမရဘဲ ပေါက်လွှတ်ပဲစား ခုန်ချင်တိုင်း ခုန်လာခဲ့ကြသည်ချည်း ဖြစ်ပေသောကြောင့်တည်း။
‘‘ တတ်စရှိလျှင် တတ်ချင်ချင်တည့် ’’ ဟူသော လင်္ကာကလေးမှာလည်း ဤအလုပ်အတွက် အားရှိဖွယ်သော အထောက်အထား တစ်ခုဖြစ်၏ ။ သတိပြုစရှိလျှင် ကြာလေလေ သတိကောင်းလေလေ ဖြစ်လာတတ်သည်။ အသံတစ်ခုခုကို ကြားလိုက်ရ၍ လေး ငါး ခြောက်ခုန် ခုန်ပြီးမှ သတိရရာမှ သုံး လေးခုန် နှင့် သတိရခြင်း၊ တစ်ခုန်
နှစ်ခုန်နှင့် သတိရခြင်း စသည်ဖြင့် တိုးတက်မှုရှိလာသည်။ ထို့ နောက်တစ်ခါတရံတွင် တစ်ခုန်မျှပင် မခုန်တော့ဘဲ ကြားကာမတ္တ၊ မြင်ကာမတ္တဖြင့် တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ် စသည်ဖြင့် နေနိုင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်လာ တော့ သည်။
ကျွန်ုပ်အဖို့ မှ ထိုကဲ့သို့၁၅မိနစ်ခန့် မျှနေနိုင်အောင် သုံးလေးနှစ်မျှ လေ့ကျင့်ယူရသည်ဖြစ်ရာ ယခုအခါ၌မူ တစ်နာရီခန့် မျှ နေနိုင်သောအခြေသို့ရောက်လျှက်ရှိပါ၏ ။ ဤကဲ့သို့နေနိုင်ခြင်းအားဖြင့် မည်ကဲ့သို့ သော အကျိုးအာနိသင်များ ကြုံတွေ့ ရပါသနည်း။
ပထမအချက်၌ စိတ်၏ အနိစ္စသဘောတရားကို သဘောပေါက်လာတော့သည်ဖြစ်ရာ ဥပမာဆောင်၍ ပြပါအုံးမည်။
မီးရထားဖြင့်ခရီးသွားသောသူသည် အဝေး၌ရှိသော တောင်တန်းများကို မျှော်ကြည့်နေခဲ့သောအခါ မီးရထား၏ လျင်မြန်စွာ ခုတ်နှင်နေသော အဖြစ်ကို မြင်ဖို့ ခဲယဉ်း၏။ ထို့ ထက် အနီးရှိ သစ်ပင်များကို လှမ်းကြည့်သည့်အခါ ရွေ့ လျားမှုသည် သာ၍ထင်ရှားလာ၏။ ထို့ ထက် မီးရထားအနီး၌ ကပ်လျက်ရှိသော မြေကြီး၊ ကျောက်ခဲ၊ မြက်ပင်စသော အရာဝတ္ထုများကို စိုက်ကြည့်သည့်အခါ ရွေ့ လျားမှုသည် သာ၍ထင်ရှားပြန်၏။ ကြာရှည်စွာ စိုက်ကြည့်သည့်အခါ မူးသလိုလိုပင် ဖြစ်လာတတ်သည်ကို ကြုံဖူးပေလိမ့်မည်။
ထိုနည်းအတူ အတိတ်အကြောင်း၊ အနာဂတ်အကြောင်း စသည်ဖြင့် တွေးတောနေသောသူသည် စိတ်၏ရွေ့ လျားမှုကို မြင်နိုင်ခွင့်မရှိ။ ကြားကာမတ္တ၊ မြင်ကာမတ္တ၊ နံကာမတ္တစသည်ဖြင့် အသိအမှတ်ပြု၍ ရှုမှတ်သောအခါ အသိစိတ်တွေ ခဏချင်း၊ ခဏချင်း ပြောင်းလဲလျက် ရှိခြင်းကို မြင်လာတော့သည်။ မီးရထားပေါ်မှ လမ်းနံဘေးရှိ ကျောက်ခဲကလေးများကို ကြာရှည်စွာကြည့်နေ၍ အရိပ်ရိပ်ဖြစ်ပြီး “မူး” လာတတ်ခြင်းကဲ့သို့ သော အဘောမျိုး ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်လာခြင်းကိုပင် ကြုံရဖူးသည်။ သို့ သော် တကယ် “မူး” လာသည်ဟူ၍ နားလည်ကြရန် မဟုတ်ပါ။ အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် (ဘာဝနာ) လေ့ကျင့်ခြင်း၏ သတ္တိကို ဖော်ပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:31 AM0comments Links to this post
ခရီးအတွက် မြေပုံ (သို့ ) ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ စာအုပ်တစ်အ...